Tag: akpaaka arụ ọrụ | Martech Zone
Tag: akpaaka arụmọrụ
Duzụ ahịa na-eche na ọ na-enweghị isi na onye ahịa na ahịa nke na-abawanye na mgbagwoju anya abụghị ihe dị mfe. Ihe omuma nke Conga na uzo zuru oke maka oru ahia - usoro gburugburu hazi ego Quote (CPQ), Ahịa Lifecycle Management (CLM), na Digital Documents - na - enyere ndi oru aka iji obi ike dozie nsogbu di iche-iche ma mekwaa ngwa ngwa. Na Conga, azụmaahịa na-aga ngwa ngwa iji gboo mkpa ndị ahịa taa ma na-abawanye ụba
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ụwa ka na-eji ma na-etinye ọdịnaya ha site na nyiwe Microsoft Office. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchekwa njikwa njikwa nke dọkụmentị gị yana arụmọrụ arụmọrụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume na-enweghị ezigbo ngwa ọrụ eji arụ ọrụ yana ebe nchekwa akwụkwọ iji jigide nsụgharị mgbe ị na-arụkọ ọrụ. Agencieslọ ọrụ ịzụ ahịa - ọkachasị site na usoro ịre ahịa ọdịnaya - mepụta ụda ọdịnaya a na ngwa desktọọpụ ọdịnala. Usoro nyocha sistemụ abụghị ụzọ kachasị mfe